Matting ntinye, mkpuchi mkpuchi mkpuchi - Hanyi
Mkpuchi Mmekọ Njikọ
Anyị na -enye akụrụngwa dị elu
Mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi ụlọ
Ọ dị mma maka ngwa ụlọ ruo n'elu ụlọ dabara adaba maka njikọta obosara 50-500mm Na-egosipụta ncha ihu igwe Neoprene nke na-egbochi ịta mmiri ebe ihe nkedo na-abanye na okpokolo agba/mkpuchi Gasketed fasteners na-eguzogide mmiri na ikuku ikuku usoro elu dị elu na-anabata obosara mgbasa na-enweghị oghere. na enwere ike ịhọrọ efere ọla kọpa mkpuchi aluminom nwere ike mezie ya iji gbochie ibu snow na oke ifufe na -aga n'ihu na mmepe ngwa ngwa ...
Aluminom Seismic Nkuku Nkuku Mgbasawanye Joint C ...
Emebere nkwonkwo ịgbasa Hanyi aluminom maka ngwa ime na mpụga. Aluminom etiti efere na -agbatị mbadamba abụọ ahụ ma na -enye ohere maka mmegharị ọkụ nke ruru 100% ma ọ bụ ọbụna 200% nke obosara njikọ ya. Ihe mgbochi ọkụ na ihe mgbochi mmiri na -enye ihe ngwọta maka mkpa mmiri anaghị egbochi ya na ihe na -egbochi ọkụ. Efere etiti nwere ike imeghari n'ụdị taịl ọ bụla site na -ese ya n'ụdị agba ọ bụla. A na -etinyekarị ụdị njikọ mgbasa a na nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ na ikuku ...
Mwepụ Mgbakwunye Mgbasa Ala Seismic
Nkọwapụta Ngwaahịa: Mgbasawanye Mgbasawanye Aha Aha Ihe: Aluminom Alloy (ASTM6063-T5) Ohere obosara: 50-350mm Ike mmegharị: +/- 50% Arịgoro: n'ala ruo n'ala Nhọrọ akụkụ: ihe mgbochi ọkụ Akara: N/M, na-enweghịkarị akara ụdị azụmahịa. : emeputa Usoro ịkwụ ụgwọ: ọ na -abụkarị T/T (nkwụnye ego 30%, itule 70% tupu mbupu) Uru: 1. Ngwaahịa niile enweghị ntụpọ, ma kwekọọ na data teknụzụ edepụtara. Anyị ga -edochi ihe ọ bụla egosipụtara na ọ nwere nkwarụ tupu anapụta ...
Ngwongwo Mgbasawanye Ọla
Emebere njikọ mgbasawanye Hanyi maka ngwa ime na mpụga. Aluminom center plate na -agbado ntọala nkwado abụọ ahụ. Ogwe ntụgharị na -enye ohere maka mmegharị ọkụ nke ruru 100% nke obosara nkwonkwo ya. Ihe mgbochi ọkụ na ihe mgbochi mmiri na -enye ihe ngwọta maka mkpa mmiri anaghị egbochi ya na ihe na -egbochi ọkụ. Efere etiti nwere ike ịbụ igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ efere aluminom. A na -etinyekarị ụdị njikọ mgbasa a na ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu. ...
Mkpọchi Metal Wall Mgbasawanye Joint
Emebere njikọ mgbasawanye Hanyi maka ngwa mgbidi dị na mpụga. Ihe mgbochi mmiri na -enye mkpa mmiri maka ọrụ. MSNSK na -ejikọ ọnụ na efere etiti dị n'elu nkwonkwo. Ọ bụ nke arụzighị arụzi yana njiri ike na-eguzogide, na-enye ụlọ ahụ ọmarịcha elu na-enweghị ihe mkpuchi ọ bụla ekpughere. A na -etinyekarị ụdị njikọ mgbasa a na ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, ebe obibi na azụmahịa. Nkọwapụta Base ute ...
Mkpuchi mkpuchi mkpuchi ala na ala
Emebere njikọ mgbasawanye Hanyi maka ngwa ime na mpụga. Aluminom etiti efere na -agbado ntọala nkwado abụọ ahụ ma na -enye ohere maka mmegharị ọkụ nke ruru 100% nke obosara nkwonkwo ya, nke gbochiri imebi ma ọ bụ kewaa taịl nile n'ihi nrụgide ma ọ bụ ngagharị ọkụ. Ihe mgbochi ọkụ na ihe mgbochi mmiri na -enye ihe ngwọta maka mkpa mmiri anaghị egbochi ya na ihe na -egbochi ọkụ. Efere etiti nwere ike ịbụ igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ efere aluminom. Nke a na ụdị mgbasa mgbasa ...
Mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi ala
Emebere nkwonkwo ịgbasa Hanyi aluminom maka ngwa ime na mpụga. Aluminom etiti efere na -agbatị mbadamba abụọ ahụ ma na -enye ohere maka mmegharị ọkụ nke ruru 100% ma ọ bụ ọbụna 200% nke obosara njikọ ya. Ihe mgbochi ọkụ na ihe mgbochi mmiri na -enye ihe ngwọta maka mkpa mmiri anaghị egbochi ya na ihe na -egbochi ọkụ. Efere etiti nwere ike imeghari n'ụdị taịl ọ bụla site na -ese ya n'ụdị agba ọ bụla. Uru nke mkpuchi mkpuchi mkpuchi ala aluminom bụ na a na -amanye ntọala n'ime ...
Mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi aluminom
Emebere njikọ mgbasawanye Hanyi maka ngwa ụlọ ruo n'uko. Ihe mgbochi mmiri na -enye mkpa mmiri maka ọrụ. MSQ-QG bụ ntọala aluminom nwere mkpuchi ọla. Ọ bụ nke ala mmezi na taper-eguzogide atụmatụ. na etiti aluminom na mkpuchi ọla na -eme ka ọ sie ike ma kwụsie ike. A na -etinyekarị ụdị njikọ mgbasa a na ụlọ oriri okomoko, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, ebe obibi na azụmahịa. Mkpuchi mkpuchi mkpuchi bụ ihe a na -ewukarị na iwu ụlọ ...
Ihe owuwu ụlọ Xuzhou Hanyi bụ onye nrụpụta ọkachamara na imepụta ihe ụlọ ọhụrụ dịka mkpuchi mkpuchi mkpuchi, matting n'ọnụ ụzọ, na ihu ihu steepụ. The ụlọ ọrụ nwere elu mmepụta ngwá, ọkachamara oru pesonel, na zuru ule akụrụngwa. Mmepụta kwa afọ nke mkpuchi mkpuchi dị iche iche bụ 100,000. Mita, ọnụ ụzọ ahụ bụ mkpochapụ mkpochapụ 10,000, na ihu ihu nke steepụ dị mita 50,000. Anyị na -anabata ụlọ ọrụ nhazi, ngalaba ihe owuwu, na ụlọ ọrụ ịchọ mma ịhọrọ ngwaahịa anyị. Maka ọnụahịa mkpuchi mkpuchi mkpuchi, ọnụ ahịa matting n'ọnụ ụzọ, na ọnụ ahịa ihu nke steepụ, biko jụọ. Anyị ga -eji mma dị elu na ọnụ ahịa dị mma mee otu ngwaahịa ahụ. Ndị ọrụ na -enweta uru ndị ọzọ!
Mgbasa mkpuchi mkpuchi mgbasawanye _ nsogbu ndị a na -ahụkarị maka iwu mkpuchi mkpuchi mkpuchi
Ebumnuche nke mkpuchi mkpuchi mkpuchi ụlọ bụ iji dozie ihe ndị a chọrọ maka ịtụle ihe dịka iguzogide ala ọma jijiji na mgbanwe okpomọkụ mgbe ogologo ụlọ ahụ toro ogologo, nhazi ya dị mgbagwoju anya, ma ọ bụ ịdị elu na ibu dị iche ...
Kedu ihe na-ebute mgbawa na mgbidi ụlọ elu
Enwere isi ihe anọ kpatara mgbawa mgbidi: Otu bụ na mgbanwe okpomọkụ na -ebute mgbawa na mgbidi. Imirikiti akụrụngwa na -enwe njirimara bụ isi nke mgbasawanye na mgbachi. Concrete Ọdịdị ụlọ pan ...
Na-egbochi mgbawa na-ewu mgbidi mkpuchi mkpuchi mkpuchi
Debe ihe mkpuchi nkwonkwo iji gbochie oghere kwụ ọtọ na mgbidi ahụ. Mgbe ngụkọta ogologo nke ụlọ ahụ gafere 50m, ekwesịrị ịwụnye mkpuchi nkwonkwo mgbasa ozi na ebe a ga -ebute nrụgide n'ime n'ihi mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ gburugburu ebe obibi na nkụ shrinkag ...
Ihe owuwu ụlọ Xuzhou Hanyi bụ onye nrụpụta ọkachamara na imepụta ihe ụlọ ọhụrụ dịka mkpuchi mkpuchi mkpuchi, matting n'ọnụ ụzọ, na ihu ihu steepụ.